थियटर भिलेजको 'गुम्फन' हेर्नुभयो ? - Postmandu
थियटर भिलेजको ‘गुम्फन’ हेर्नुभयो ?
2019-08-29 PostmanduLeaveaComment on थियटर भिलेजको ‘गुम्फन’ हेर्नुभयो ?
काठमाडौं । लाजिम्पाटमा रहेको आफ्नै नाटक घर भत्किएको लामो समयपछि थियटर भिलेजले नयाँ नाटक मञ्चन गरेको छ ।
एलिसा सालोको फिनिस नाटक “रयादेस्सवारा” बाट प्रभावित यस नाटकलाई नेली केइनानेन र लिया अब्सेसको अंगेजी अनुबाद “फलिङ” बाट जिवेश रायमाझीले नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् । तर, यसलाई नेपाली परिवेश र अहिलेको सामाजिक परिस्थितिसँग जोड्न निर्देशक आफैंले अनुकरण गरी निर्देशन गरेका हुन् ।
भर्खरै किशोरावस्था पार गरेकी एलिना दुःखी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । अलिअलि मोटोपन बाहेक उनको अरु कुनै समस्या छैन । तर एक्लो युवा भएकै कारणले यी कुराहरुले मानिसलाई असर गरिरहेका हुन्छन् । त्यसपछि उनी आफ्नो साथीको पासवर्ड प्रयोग गरेर अनलाइन गार्डेनमा पुग्छिन् । जहाँ तँपाई जे चाहनुहुन्छ त्यो बन्न सक्नुहुन्छ । गार्डेनमा एलिना र डार्क फ्लोको भेट हुन्छ जसले एलिनालाई राम्रोसँंग बुझ्छ । जबकी डार्क फ्लो आफैं पनि एलिना जस्तै निराश व्यक्ति हुन्छ ।
साइबर संसारमा हराएर आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, आफन्तसंँगको सम्बन्ध तथा मानवियतानै गुमाइरहेको यो पुस्ताले प्रत्यक्ष जिवनमा आफ्नो समस्यासँग जुध्ला त ? नाटक यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित छ ।
युवापुस्तालाई नै लक्ष्यित गरी उनीहरुकै कथामा नाटक गर्ने सोचका साथ नाटक तयार गरिएको निर्देशक रानाभाटले जानकारी दिए ।
दिपेश राईको सह–निर्देशन तथा बिमल सुवेदीको मञ्च तथा प्रकाश परिकल्पना रहेको यस नाटकमा अभिषेक गैरे, आयुष्ना गिरी, इष्टु कार्की, एचके अधिकारी, गुगल लामा, पिबिएस रिदम सुनुवार, प्रमोद खड्का, बिजेश गौतम, मदन सुवेदी, संगिता थापा लगायतको अभिनय छ ।
थियटर भिलेजले चारुमती, सान्दाजुको महाभारत, सिंहदरबारको टेण्डर, मालीनी, ह्यामलेट, यार्मा जस्ता नाटकहरु राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मञ्चन गरिसकेको छ ।
थियटर भिलेजको पछिल्लो नाटक “गुम्फन” लाई दिलिप रानाभाटले निर्देशन गरेका हुन् । यो नाटक शिल्पी नाटकघर बत्तिसपुतलीमा भदौ ५ देखि मञ्चन भइरहेको छ । नाटक भदौ २९ सम्म (मंगलबार बाहेक) मञ्चन हुनेछ ।
बन्ने भयो गुञ्जन, यस्तो छ कथा
पैसा चोर्ने चिनियाँ टेक्निक, एटिएमबाट यसरी भयो चोरी (भिडियो)
चर्चित गीत ‘चुलेसीमा’, १८ बर्षपछि रिमेक (भिडियो)
2018-08-20 2018-08-20 Postmandu
कालेबुङमा शूटिङ भएको दयाहाङको ‘आप्पा’ (ट्रेलर हेर्नुहोस्)
2019-05-30 2019-05-30 Postmandu
संजय दत्तका ३०८ गर्लफ्रेण्डः ‘संजु’को टिजरमा रणवीरलाई हेर्नुहोस्